ဒီနေ့နှင်းတွေကျမယ်လို့ သတင်းမှာလည်းပါထားတယ်။ ထိုင်စောင့်နေတာ မနက် ၄ နာရီလောက်မှာကျတယ်။ လမ်းမပေါ်မှာ ဖွေးနေတာပဲ .. အရမ်းမိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ အခုပဲ ပြန်လာတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ဖွေးနေတာပဲ။ အိမ်ခေါင်မိုးလေးတွေဆို ဆေးအဖြူရောင်တွေ လွှမ်းထားသလားအောင်းမေ့ရတယ်။ အခုမှ စကြုံတော့လည်း အထူးအဆန်းပေါ့။ မော်စကိုက ကိုဝေဟင်တို့အတွက်ကတော့ ဒါမျိုးက ရိုးနေပြီ :P ဒီနိုင်ငံကလူတွေကတော့ နှင်းကို မကြိုက်ကြပါ။ ရာသီဥတု ဆိုးတာရယ်၊ Travel လုပ်ရတာ အဆင်မပြေတာရယ်ကြောင့် လူမုန်းခံနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာပဲပြောပြော ပျော်တယ်။ တစ်ညလုံး ထိုင်ပြီးစောင့်နေတာပဲ ကြည့်တော့။ တစ်ညလုံးတော့ ထိုင်ပြီးစောင့်ရကျိုးနပ်ပါရဲ့ ... မနက်ကျတော့ တော်တော်နဲ့ မနိုးတော့ဘူး ဟီးဟီး :P ဒါလည်း မဆန်းတော့ပါဘူးလေ။ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အလေ့ကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီရောက်တဲ့သူတိုင်းနီးပါးလည်း ဖြစ်ကြတာပဲ။ နှင်းကလည်း လန်ဒန်မှာ တစ်နှစ်မှ တစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲ ကျတယ်လို့ပြောတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ ကြုံဖူးလိုက်ပြီပေါ့ :)
နောက်နှစ် ဘယ်လိုအချိန် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ထပ်ပြီးကျအုံးမလဲတော့ မသိဘူးပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုခုပြောင်းလဲနေမှာ သေချာပါတယ်။ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်း တိုးတက်ခြင်း ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ ကြိုးစားရအုံးမည်။ ကဲ ... နှင်းပွင့်တွေရေ ... ငါတို့ ပြန်ဆုံကြဦးမှာပါ :) အခုတော့ မျက်စိကို အနားပေး မှေးလျက် အိပ်ရာဝင်တော့မယ် ... ကောင်းသောညပါ။
Chan Mya Soe 10:19 pm
ဒီမှာက တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ပဲမြင်ရတာဆိုတော့ ဟိဟိ ပျော်တယ်ပေါ့ဗျာ .. အခုမှ ပထမနှစ်ကျောင်းသားကိုး :P
WaiHin 2:21 am
နှင်းကျတာတော့ မိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သွားရလာရခက်တယ်။ ဒီမှာတော့ တော်တော် အေးနေပြီ။ ဒီနေ့ အပူချိန်က -10 C ရှိတယ်။
that was so annoying. I had to wait more than one hour foratrain at the station that morning.
Chan Mya Soe 2:10 am
haha ... it's London. ya . isn't it. :P
Ingrid 5:48 pm
နှင်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံ ထွက်ရိုက်ထားပါလား ... :D
Chan Mya Soe 5:51 pm
နှင်းတွေနဲ့တော့ရိုက်ချင်ပါတယ် အဲဒီအချိန်ကြီးက မနက်လေးနာရီဖြစ်နေလို့ လူကိုမရှိဘူး :P
၄ နာရီထိစောင့်တယ်လား...စနေက မသိဘူး..
ဖွေးဖွေးဖြူလို့ ညီမလေးခေါ်ပြီး ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ကြသေးတယ်။
ဒီနှစ်ကျတာ မနှစ်ကထက်များတယ်...စကောတလန်မှာတော့ ဒီဇင်ဘာ
ဆိုရင်ကျပြီး ခါတိုင်းနှစ်က ..ဒီနှစ်က နှင်းလာတာနောက်ကျတယ်..
ကလိုဘာ ၀မ်းမင်း ကြောင့်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှင်းကျရင် ပျော်စရာ
Chan Mya Soe 8:35 pm
၂လက်မကျော်ကျော်လောက်ထိ ကျတယ်လို့တော့ သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဓာတ်ပုံကတော့ ရိုက်ကို မရိုက်နိုင်တော့ဘူး မနက်ထမလို့ဘဲ ဒါပေမဲ့ ၅ နာရီလောက်မှ အိပ်တော့ .ဟိဟိ ဘယ်နှယ့်မှ မဘယ့်နှယ့်နိုင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ် :)